DHEGEYSO-Barlamaanka Soomaaliya oo kahoryimi go’aan xukuumaddu gaadhey. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Barlamaanka Soomaaliya oo kahoryimi go’aan xukuumaddu gaadhey.
Luulyo 25, 2016 12:19 b 0
Muqdisho, July 25 2016-Guddiga Arrimaha Dibada ee Baarlamanka Federaalka Soomaliya ayaa kasoo horjeystay Go’aanka ay dowlada Soomaliya dalka ugu saartay Hay’adda Nile Academy ee dalka Turky-ga laga leeyahay.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ah Gudoomiye ku-xigeenka Guddiga Arrimaha Dibada ee Baarlamanka Soomaliya oo la hadlay Radio Daljir ayaa sheegay in uu ahaa Go’aan lagu deg degay in dalka laga saaro Hay’ada Nile Academy oo maamulaysay Goobo waxbarashada, iyo Caafimaad.
Waxa uu intaasi ku daray in heshiiska dalka ay ku yimaadeen Hay’adaha dalka Turky-ga uu ahaa in dalka ay maalgashi ku sameystaan hadii ay dhibaato geystaan lagala xisaabtamo dowladooda. Hadaba Xildhibaanka waxa uu uwaramay Cumar Laki Man oo ku sugan Studiyaha Daljir ee Caabudwaaq
DHEGEYSO-Tartanka shaqooyin ka banaan dowladda hoose ee Galkacyo oo walaac laga muujiyey.